Global Voices teny Malagasy » Shina: nifindra ho an’ny Hong-Kong ny google.cn · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2010 21:51 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Teknolojia
Nanapa-kevitra ny handao an'i Shina ihany ny Google. Vantany vao nahavita ny fanambarana ny Google dia nitsahatra tamin'ny fnaovana sivana ny tadiavina amin'ny milin-karoka ao amin'ny google.cn amin'ny familiana hankany amin'ny google.com.hk. Ao amin'ny bolongana ofisialin'ny Google i David Drummond, lehiben'ny fiandraiketana ny lafiny lalàna no manazava fa ny anton'izao fanapahan-kevitra izao  dia noho fitakian'ny fitondram-panjakana Shinoa fa “fepetran-dalàna tsy azo iadian-kevitra” ny fanaovan'ny tena sivana ho an'ny tena ihany. Na izany aza dia mbola hanohy ny asany any Shina ihany ny sampana [fikarohana sy fampandrosoana?] R&D ao amin'n'ny Google.
Etsy ankilan'izany kosa dia nanambara i Shina (amin'ny alalan'ny Xinhua ) fa “nandika ny fampanantenana voarakitra an-tsoratra” ny Google ka “diso tanteraka” tamin'ny fanajanonana ny sivana.
Na izany aza dia iharan'ny voambolana voahidin'ny Rindrim-ben'i Shina [Great Fire Wall] ny google.com.hk, raha mbola azo jerena ny valany [domaine] any Shina. Navoitran'i  Rebecca MacKinnon fa any an-tokotanin'ny fitondranam-panjakana ny baolina izao:
1) Raha toa ka hosakanany avokoa ny momba ny google.com.hk, izay tsy mbola nosakanana hatramin'izao. Raha marani-tsaina ry zareo dia tokony avelany amin'izao ny raharaha fa tsy hisarika lava ny gazety amin'ny sivana fanaon-dry zareo.
2) Raha toa ka avelany hiodina ihany ny milin'ny fandraharahana eo amin'ny resaka dokambarotra sy ny fikarohana sy ny fampandrosoana [R&D] any Shina.
Na dia efa nisy ihany aza ny siosio handehanan'ny Google, dia maro ny mpiserasera Shinoa nonalahelo rehefanahare ny vaovao. Jason Ng avy ao amin'ny Kenengba , ohatra, nanatsafa ny mpisioka an-tserasera Shinoa amin'izao fanapahan-kevitry ny Google izao ary nahazo valiny mihoatra ny 100. Indro ny fehin'ny hitany:
Manahy ny sasany fa hanao ampihimamba eo amin'ny milin-karoka ny Baidu will ary mihabetsaka ny valin'ny karoka natao; Manahy ny maro fa tsy ho tafiditra amin'ny tolotra ataon'ny Google intsony, tahaka ny Gmail, Reader, Calendar; Manahy ny webmasters sasany fa tsy hiasa intsony ny dokambarotra [Adsense]; Ny sasany mihevitra fa nihemotra folo taona ny fampivoaarana ny aterineto Shinoa.
Ho an'ny mpampiasa aterineto any amin'ny fototra moa dia lavitry ny filazana ataon'ny fitondram-panjakana manao hoe “mitombo ao anatin'ny fahasalamana ny aterineto Shinoa” izao fialan'ny Google izao. Tsy voafetra eo amin'ny famoronana milina tsara indrindra fanaovana karoka ihany ny fanovana vitan'ny Google.
Orinasa misahana aterineto manan-kaja indrindra ny Google. Miezaka mandrakariva izy ny mampiditra fanavaozana sy zava-manaitra amin'ny aterineto. Raha somary miitatra kokoa, ny Google no misolo tena ny tolotra maimai-poana amin'ny aterineto, ny fitarihana sy ny fanavaozana teknolojika ary ny tsy fijoroana tsy miandany anivon'ny net. Izay no endrika telon'ny Google.
Efa mahatsinjo mialoha sahady ny fanaratsiana ataon'ny fitondrana amin'ny Google any Shina ny mpamaham-bolongana:
1. Hanameloka ny Google ny matoan-dahatsoratry ny vohikalan'ny fitondrana tahaka ny xinhua.com, people.com.cn, china.com sy ny sisa.
2. Tsy mahazo alalana hamoaka hevitra manohana ny Google ny vavahadim-baovao tahaka ny 163, sina, sohu ary ny hafa.
3. Mitongilana dia mitongilana any amin'ny fitondrana ny vaovao miresaka Google.
Na eo aza izany dia maro ny mpampiasa aterineto no naneho ny fanohanany ny Google tamin'nay alalan'ny fandefasana voninkazo ao amin'ny foiben'ny Google ao Beijing: nitafa tamin'ny mpanohana maro i Gaoming1916:
Ankoatra izay dia manodidina ny 100 amin'ny mpanohana ny Google no nivory teo amin'ny foiben'ny Google China halina mba hiari-tory miaraka amin'ny labozia. Saingy nosakanan'ny polisy sy ny mpitandro ny filaminana izy ireo:
@yanglicai: Nijanona ny fiaran'ny polisy iray ka nivoaka avy tao ny polisy 6 -7 niangavy ny olona hiparitaka. Saingy hira manao hoe “O lovely Grass Mud Horse” [Ry soavalin'ny fotaka ambozaka mahafatifaty] no valin'izany
@tengbiao : 警察驱赶，很多便衣。我看到声援者百人。
@tengbiao: Aparitaky ny Polisy ny olona, maro ny mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily ary tokony ho 100 eo ho eo ny isan'ny olona.
Twitter no sehatra famoahan-kevitra lehibe indrindra tsy voasivana momba ity fandehanan'ny Google ity ary mifampizara vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana hashtag #googlecn ny mpampiasa azy. Indreto indray ny nofantenana avy aminy:
@roseluqiu : 谷歌走了，在我看来只不过是修正之前的错误，遵守不做恶的承诺。其它的公司，既然没有这样的价值观和原则，所以也不必苛求他们。但是因为自己要求不高而批评google,那就是非常卑鄙的行为了。在google问题上，看到了很多小人。 #googlecn
@roseluqiu: Lasa ny Google. Amiko dia ho fanitsiana ny fahadisoana nataony no nanaovany izany sy ny itazonana ilay fampanantenana ny “tsy hanao ratsy”. Tsy manantena ny orinasa hafa tsy manana soatoavina mitovy aminy hanaraka ny dian'ny Google izahay. Saingy tsy afa-mitsikera ny Google noho ny tsy fananany fotokevitra. Tsy mendrika mihitsy izany fihetsika izany. Maro ny ratsy saina rehefa miadfy hevitra momba ny Google. #googlecn
@geekinmedia miresaka momba ny Google ny CCTV amin'izao fotoana izao. Arak any efa nandrasako moa dia milaza ny Google ho benahoana sy tsy mahalala menatra ny ao.
@laokalaoka zatra mividy vovo-dronono any Hong Kong izahay. Ankehitriny tsy maintsy mampiasa ny server any Hong Kong izahay raha hitsidika ny Google, afa-mahazo ny vakisininay any Hong Kong koa angaha izahay?
@zhanghui8964 Tahaka ny bozaka ny olona ary heverina ho tahaka ny hetotra ny feony. Mpangalatra ny mpitondra ao amin'ny Governemanta ary ny Antoko no zohy fiereny. Miangavy ny Google hiala, tsy eto ny toerana ho anareo. Saingy ho faly izahay amin'ny fiverenanareo henin-kaja mby akaiky. #googlecn
@heicailiao: Ho an'ny HongKongey tahaka ahy, Asehon'ny fifindran'ny ny hasarobidin'ny fizakantenan'i HK. Tsy tokony hivena isika na dia irainjehy aza.
@SecretaryZhang  真理部指令：请各地清理借此事攻击党、国家、政府部门、互联网相关政策的文字、图片和音视频等。请各地清理声援谷歌、给谷歌献花、挽留谷歌、为谷歌叫好等跟政府政策唱反调的文字、图片和音视频等。请各地主管近期派专人监控谷歌相关信息，如有群体性事件信息。 #GoogleCN
@SecretaryZhang Filazana avy amin'ny sampandraharahan'ny fampielezan-kevitra: Fotsio daholo azafady ny soratra, sary ary lahatsary manakiana ny antoko, ny firenena, ny sampan-draharaham-panjakana ary ny politikan'ny aterineto. Fafao avokoa ny votoaty na fitsapana na sary na lahatsary na feo maningana amin'izay ijoroan'ny governemanta, tahaka ny fanohanana ny Google fandefasana voninkazo na fiangaviana ny Google hijanona. Mametraha olona manokana hanaramaso manokana ny vaovao mifandraika amin'ny Google, indrindra fa ny vaovao mifandraika amin'ny fiaraha-mientan'olona maro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/25/5491/
 manazava fa ny anton'izao fanapahan-kevitra izao: http://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html
 geekinmedia : http://twitter.com/geekinmedia/status/10922595935